Safaarada Soomaaliya ee Qatar oo soo dhaweysay guusha ay soo hoyeen kooxda kubadda cagta ee Jaalliyadda-Sawirro – Radio Muqdisho
Safaarada Soomaaliya ee dalka Qadar ayaa munaasibad affur ah u samaysay Kooxda Kubadda Cagta ee Jaaliyada Soomaalida ee dalka Qadar kuwaasi oo laba Koob oo lagu qabtay magaalada DOHA mid kamida ku guulaystay inay qaadaan, halka Koobkii kalena ay ka galeen kaalinta sadexaad.
Munaasibada ayaa waxaa goob joog ahaa Safiirka Soomaaliya ee dalka Qadar, Qunsulka Safaarada Soomaalida, mas’uuliyiin xilal kala duwan kasoo qabtay dawlada, Abwaano Soomaaliyeed kuwaasi oo dhamaantood muujiyey sida ay ugu farax san yihiin guusha ay soo hooyeen ciyaartooyda Soomaalida.
Ugu horayn waxaa madasha ka hadlay tabaraha Kooxda Kubbada Cagta ee Jaaliyada Soomaalida Cabdirashiid Maxamuud Ciise wuxuuna ka warbixiyey Ciyaarihii ay ka qayb galeen iyo Guusha ay ka gaadheen.
Qunsulka Safaarada Soomaaliya Mudane Mukhtaar Cali Yuusuf ayaa dhankiisa bogaadiyey guusha ay soo hoyeen ciyaartoyda Soomaalida, wuxuuna sheegay inay tahay mid taariikhda u gashay.
Intaasi waxaa dhalinyadu Koobka ay kusoo guulaysteen gudoonsiiyeen Safiirka Soomaaliya ee dalka Qadar Mudane Cumur Cali Idiris, iyadoona Wejigooda laga dheehanayey farxad balaadhan.
Safiirka oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in guusha ay u soo hoyotay dhamaan Ummada Soomaaliyeed, wuxuuna ku amaanay dedaalka balaadhan ee ay sameeyeen dhalinyaradu, isagoona xusay inay dawlada Qadar u gudbiyeen sidii ay u garab istaagi lahayd dhalinyarada looguna taageeri lahaa agab iyo garoon ay ku ciyaaraan.
W/D: Axmed Darwiish oo Qatar jooga
Maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay amniga iyo nadaafadda Muqdisho